खानपिउन छोडेर जेलमा रोएर मात्र बस्दैछन सञ्जय दत्त
पुणाको येरवाडा जेलमा सजाय काटिरहेका सञ्जय दत्तले दुइ दिन देखि खान पिउन छोडेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार सञ्जय दत्तको बाबु सुनिल दत्तको एक मात्र बहिनी राजरानीको मृत्यु भएको छ जस्ले गर्दा सञ्जय धेरैनै दुखी भएका छन्। सञ्जय दत्त आफ्नो फुपुको अन्तिम संस्कारमा समावेश हुन चाहन्थे तर यो हुन सकेन। वाहाँको निधनको समाचार सुने पछि सञ्जय धेरै बेर सम्म जेलमा बनेको मन्दिरको अगाडी बसिरहेका थिए र त्यो बेला उनको कसैसँग पनि कुराकानी हुन सकेन। ...
रेडियो मा दैनिकी १ घण्टा फिल्मी कार्यक्रम चलाउँछन सञ्जय दत्त
राजकुमार हिरानीको फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई मा विध्या वालान सँग रेडियोमा कार्यक्रम चलाईसकेका सञ्जय दत्त आजकल पनि रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन तर फरक सिर्फ यति छ कि उनले पहिला रिल लाइफ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए अहिलो रियल लाइफ गर्दैछन्। मुम्बईमा भएको बम ब्लाष्टमा ग्रैरकानुनी हातहतियार राखेको आरोपमा सजाय काटिरहेका सञ्जय दत्त जेल प्रशासन द्धरा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम जेल रेडियोमा दैनिकी १ घण्टा कार्यक्रम सञ्चलान गर्दैछन्। र यिनको यो कार्यक्रम यति फेमश भैसकेको छ कि कैदिहरु मात्र नभएर पुरै जेलका स्टाफ हरु यो कार्यक्रमको पर्खाइमा बस्ने...
आखिर कस्को आँखाको दिवानी छिन् त दिपिका ?
जहाँ बलिउडमा अैले हरकोही दिपिका को दिवाना छन्। कोहि यस्तो पनि छिन् जसको दिवानी दिपिका छिन्। दिपिकालाई काजोल र एश्वर्या राय बच्चनको आँखा असाध्यै मन पर्छ। दिपिका पादुकोण वोग आईवियर इवेंट मा हिस्सा लिन पुगेकी थिइन्। त्याहाँ उनले भनिन कि उनलाई काजोलको आँखा धेरै मन पर्छ। र साथै उनले भनिन कि एश्वर्याको आँखा पनि उनलाई धेरै मन पर्छ। उनले त्याहाँ एउटा अर्को कुराको खुलासा पनि गरिन कि फेशन को कुरामा उनको आमा नै उनको गुरु हुन जति आमाले सिकाईन उनले त्यतिनै सिकिन। दिपिकालाई पनि आफ्नो आमा जसरी सिम्फल बस्न मन पर्छ भनिन। यो पनि पढ्नुहोस हप्ताको दुईदेखि तीन पटक यौन...
के सल्लाहा दिए त अजयले कपिललाई?
बलिउड इन्ड्रसटिमा अैले कपिललाई नचिन्ने कोहि पनि छैन। आम जनता देखि लिएर फिल्मी सुपरस्टारहरु पनि कपिलको फ्यान भइसकेका छन्। यसमा हाल यो हल्ला चलेको छ कि कपिलले विवाह गरेका छन्। जानकारीको लागी कपिलको बेहुला बनेको तस्विर केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो जसले सबैलाई दङ्ग बनाएको थियो। वहि यो कुरा सुपरस्टार अजय देवगन सम्म पुगेको थियो र अजयले कपिललाई विवाह नगर्ने सल्लाहा दिएका छन्। हजुर अजयले कपिललाई यो सन्देश पठाएका छन् 'मेरो सल्लाहा मान्ने हो भने विवाह नगर'। कपिलको आउदो फिल्म किस किस को प्यार करुको ट्रेलर १३ अगस्तमा सार्वजनिक हुदै छ। दर्शक लाई भरोसा छ...
राधे मा बन्ने भएकी छिन मल्लिका सेरावत
बलिउडको कन्ट्रवर्सि क्वीन मल्लिका सेरावत अब फेरी नया कन्ट्रवर्सीको लागी चर्चामा आउने भएकी छिन। जानकरी अनुसार मल्लिका एउटा फिल्म गर्ने भएकी छिन जुन राधे मा मा आधारित छ। राधे मा को लागी भएको विवादहरु बाट प्रभावित भएर निर्देश रंजीत शर्माले निर्णय गरेका छन् उनि एउटा फिल्म बनाउदै छन जुन राधे मा को जिन्दगीमा आधारित हुने छ। त्यस फिल्मको मुख्य भुमिका मा मल्लिका शेरावत हुने छिन्। मल्लिका शेरावत सँग डलि बिन्द्रा, राहुल महाजन र पुन जानवार पनि सँगै देखिने भएका छन्। २३ साउन, काठमाडौं । निकै लामो गलफत्तीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका...
राखी सावान्तले भनिन सनि लियोनीलाई देश बाट घिसारेर बाहिर निकाल्नु पर्छ
अैले बलिउडको सबै कलाकारहरुले जहाँ इन्डियामा पोर्न साइटस ब्यान्ड गर्दा सरकारलाई गाली गर्दै छन् भने त्याँहा बलिउडको आइटम गर्ल मानिने राखी सावान्त ले समर्थन गरेकी छिन्। एउटा अंग्रजी पत्रकारसँग अन्तर्वाता दिने क्रममा राखीले पोर्न एक्ट्रेस सनि लियोनीको पनि ब्यान्ड गर्ने माग गरेकी छिन। उनले भनिन ठुलो ठुलो प्रधान मन्त्रीले गर्न नसकेको काम नरेन्द्र मोदीले गरेका छन्। उनले नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। हरेक स्कुलको ११ वर्षको बच्चाले पनि पोर्न फिल्महरु हेर्ने गर्दछन्। बच्चाहरुलाई मोबाइल र ल्यापट दिइने गरिन्छ। सनि लियोनीलाई पनि इन्डियामा...
३० देखि ६० वर्षको उमेरमा कदम राख्दैछन् क्याट्ररिना र सिद्धार्थ
स्टार्स र मेकअप त एकअर्काको सम्बन्ध धेरै गहिरो छ। तर पनि बलिउडमा सबै भन्दा कम मेकअप गर्ने हिरोनिको रुपमा क्याट्ररिनालाई चिनिन्छ। तर अब क्याट्ररिना आफ्नो आउदो फिल्मको लागी धेरै मेकअप गर्ने भएकी छिन्। किनकी यसमा क्याट्ररिना र सिद्धार्थ मलहोत्रा ३० देखि ६० वर्ष सम्मको उमेर मा देखिने भएका छन्। फरहान अख्तरको होम प्रोडक्शनमा बन्न लागेको यो फिल्ममा सिद्धार्थ मलहोत्रा र क्याट्ररिना एउटा कपलको रुपमा देखिने भएका छन्। दुवै कलाकार यो फिल्ममा अलग अलग उमेरमा देखिने भएक छन्। सिद्धार्थ मलहोत्रा ले भनेका छन कि यो फिल्ममा उनि २८ देखि ४६ र ४० देखि ६० वर्षको उमेरमा देखिने भएका...
सिद्धार्थले कुन कामको लागी गरे अक्षयको बयान
सिद्धार्थ मलहोत्रा अहिले उनको आउदो फिल्म बर्दशलाई लिएर चर्चामा छन् उनि यो फिल्ममा अक्षय कुमार सँग देखिदै छन्। उनले अक्षयको बयान गर्दै भने कि उनि निजी जिन्दगीमा पनि एकदमै राम्रो मान्छे छन्। अक्षय अहिले मार्शल आर्टको ट्रेनिङ स्कुल चलाउदै छन जहाँ उनले मात्र महिलाहरुलाई ट्रेनिङ दिदै छन्। सिद्धार्थले भने म अक्षयको काम बाट एकदमै प्रभावित छु जुन काम अक्षय गर्दैछन त्यो देशको लागी एकदमै राम्रो काम हो। विशेष गरि महिलाहरुको लागी। उनले भने अक्षय अब छिट्टैनै महिलाहरुलाई सटिर्फिकेट दिदै छन्। अब महिलाहरु पनि आफ्नो सुरक्षाको लागी लड्ने छन्। यदि कसैले महिलाहरु माथी...
तमाशाको शुटिङमा बिरामी भएका रणविरको हेरबिचार गर्न पुगिन क्याट्ररिना
क्यट्ररिना कैफ र रणविर कपुरको सम्बन्धको कुरा त सबै लाई थाहा नै छ। रणविरले पनि यो सम्बन्धलाई अप्रत्यक्ष रुपमा स्वीकारी सकेका छन्। रणविर र दिपिका को फील्म तमाशाको शुटीङको क्रममा रणविर विरामी परेका छन् र यो बेला क्याट्ररिना एउटा नर्स जसरी रणविरको हेरविचार गर्दै छिन्। फिल्म तमाशाको एउटा सिनको लागी रणविरलाई अनुहारमा पेन्ट लगाउनु पर्ने थियो रणविरले अनुहारमा पेन्ट त लगाए तर पेन्टको कारणले रणविरको अनुहारमा इन्फेक्शन भएकाव छ। यस कारण डक्टरको सल्लाहा अनुसार उनी आराम गर्दै छन् त्यसैले फिल्मको डाइरेक्टर...
फिल्म बर्दश सँगै अर्को के धमाका गर्न चाहन्छन अक्षय कुमार
अक्षय आफ्नो फिल्म बर्दशको लागी धेरै नै मेहेनत गरेर प्रमोशनमा लागेक छन्। तर उनी आफ्नो आउदो फिल्म 'सिंग इज ब्लींगको' लागी पनि त्यति नै उत्साहित छन्। सुन्नमा आएको छ कि अक्षय आफ्नो आउदो फिल्म 'सिंग इज ब्लींगको' ट्रेलर फिल्म बर्दश सँग जोड्ने योजना बनाउदै छन। हालसालै अक्षयले भनेका छन कि उनि सिंग इज ब्लींगको ट्रेलर बर्दश सँगै देखाउने योजनामा छन्। बर्दशमा अक्षय बाहेक जैकलीन फर्नांडिज, सिद्धार्थ मलहोत्रा, जैकी श्रॉफ पनि छन्। अक्षयको सिंग इज ब्लींगको निर्देशक ग्रेजिंग गोट पिक्चर्स और पेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो र फिल्ममा एमी जैक्सन, लारा दत्ता पनि देखिने भएका...
दिपिका आखिर किन रिसाकी छिन् शाहरुख सँग
जुन दिन बलिउडमा रोहित शेट्टीको दिलवाले र संजय लिला भंसालीको बाजीराव मस्तानी एकै दिन १८ दिसेम्बर रिलिज हुने घोषणा भयो त्यो दिन दर्शकहरु मात्र हैन वलिउड इन्ड्रसटी पनि दंगमा रहे। दुइटा फिल्म नै यो सालको ठुलो बजेटको फील्म हो। दिलवालेमा जहा शाहरुख काजोल, बरुण धवन, र कृति सेनको जोडी देख्न पाइनेछ भने बाजीराव मस्तानीमा प्रियंका चोपडा, दिपिका पादुकोण र रणविर सिंहको जोडी देख्न पाइनेछ।दुवै फिल्म महत्वपुर्ण छ। हुन त शाहरुख र दिपिका धेरै फिल्ममा एकै साथ देखिएका छन दिपिकाको पहिलो चलचित्रनै शाहरुख सँग थियो। यस्तोमा दुइ फिल्मको प्रतिस्पर्धा...
फिल्म शानदारको पोष्टर सार्वजनिक
शाहिद कपुर र आलिया भट्टको आउदो रोमान्टीक फिल्म शानदारको पोष्टर सार्वजनिक भएको थियो जसमा शाहिद र आलिया एक अर्काको काखमा सुतेका थिए र फेरि एउटा पोष्टर सार्वजनिक भएको छ जसमा दुवै फरकनै अन्दाजमा देखिएका छन। पोष्टर धेरैनै इम्प्रेसिप छ। आलिया शाहिदको काखमा बसेकी छिन र उनलाई किस गरेकी छिन्। यो फिल्ममा पहिलो पटक शाहिद र आलिया एकै पटक देखिन लागेका हुन् फिल्मकोट्रेलर पनि ११ अगस्तमा रिलिज हुने छ। यो फिल्मको पोष्टरलाई हेरेर अन्दाजा लगाउन सकिन्छ कि फिल्म मुम्बईको जनजिवन सँग सम्बन्धित छ। धर्मा प्रोडक्सनको लगानीमा बनेको यो फिल्मको निर्देशक भने विकास बहल...
सोनु निगम पछि यो गायकलाई दिए सलमानले धोका
सलमानको जब मनको कुरा आउछ त सलमान न कसैको फाइदा हेर्दछन न कसैको नोक्सान। हालै सलमानलाई सिंगिङको सोख चढेको छ तर आफ्नो यो कलालाई सलमानले अरुको हित विपरित ठुलो बनाइरहेका छन्। किक को हैंगअाेभर भन्ने गित सलमानलाई यति धेरै मन पर्यो कि उनले सोनु निगमले गित को रिकडीङ गरेपश्चात पनि त्यो गित आफ्नो आवाजमा रेकर्ड गरेर गितमा आफ्नो आवाज रखेका थिए। फेरी एक पटक यस्तै भएको छ। यो पाली त झन् आउदै गरेको नयाँ ट्यालेन्ट सँग यस्तो भएको छ। अरमान मलिकको नाम सुनेको होला अरमान मिलक लिटिल च्याम्प जस्ले सारेगमप मा सबै मन जितेका थिए। उनले धेरै फिल्महरुमा गित पनि गाइसकेका छन्।...
सलमान खान चाहदैनथे कि यो एक्टर बलिउडमा आउन
हुन त बलिउडको गड फादर भनेर नै सलमान लाई चिन्ने समय आउन लागी सकेको छ किनकी उनि नयाँ र प्रतिभाशाली व्यत्ती हरुलाइ बलिउडमा ल्याउने गर्दछन्।उनले धेरै नयाँ एक्टर एक्ट्रेस हरुलाई बलिउडम ल्याएर उनिहरुको करियरको सिढिनै बनेका छन्। तर उनले सिद्धार्थ मल्होत्रा लाई फिल्ममा आउन बाट किन रोके त? यो कुरा साँचो हो हालै यो कुरा सिद्धार्थ मल्होत्रा आफैले भनेका छन् कि सलमानले उनलाई फिल्मलाइनमा नआउन सल्लाहा दिएका थिए। सिद्धार्थले भने की उनको एउटा साथी बिग बोसको कन्टस्टेन्ट थियो र उनि उनको साथमा सलमान खानलाई भेट्न गएका थिए तब उनलाई सलमानले फिल्ममा नआएर बरु...
के कमेडी किंग कपिल शर्माले गरे विवाह
कमेडी नाइट्स विथ कपिलमा कपिल नहुदा दर्शक हरु निकै नै निराश छन्।सबैको प्रश्न यहि छ कि आखिर कपिल किन यसरी हराएका हुन। कपिल आफ्नो ढाडमा लागेको चोटको कारण बेड रेष्ट गर्नुपरेको हुदाँ कार्यक्रम नचलाएको भन्ने पनि खबर सुन्नमा आएको छ तर हालसालै सामाजिक सञ्जालमा कपिलको यस्तो तस्विर हरु देखिएको छ जस्ले सबैलाई सोच्न मजबुर गर्दिछ कि कपिल ले कतै विवाह त गरेनन्। किनकी समाजीक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्विर हरुमा कपिल बेहुलाको रुपमा देखिएका छन्।अब यसमा कतिको सत्यता छ भन्ने कुरा थाहा छैन किनकी यो तस्विर कपिलको आउदो फिल्म किस किस को प्यार करु को तस्विर हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।...